Rehefa Tratran’ny Aterineto Amin’ny Resaka Fanjanahantany Ny Miss RDC Sy Ny Mpanao Politika Frantsay Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2016 15:41 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Español, Français
Dorcas Dienda sy François Fillon
Tsy dia misy zavatra betsaka ifandraisan'i François Fillon sy Dorcas Dienda. Fa ilay Praiminisitra frantsay teo aloha sy mety ho kandidà amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2017 ary ilay kandidà amin'ny fifidianana Miss RDC ( Repoblika Demoktratikan'i Kôngô) dia tsy maintsy niatrika latsa nifanelanelana andro vitsy avy amin'ireo afrikana mpampiasa aterineto noho ireo teny nolazainy momba ny fanjanahantany nataon'i Frantsa tamin'ny faritr'i Afrika.
Ho fampatsiahivana, nilaza tao Sablé-sur-Sarthe ny 30 Août 2016 i Atoa.Fillon izay niditra nanao fampielezankevitra ho amin'ny fifidianana savaravina tamin'ny ankavanana , fa mikasika ny fanjanahantany dia tsy ”meloka tamin'ny faniriany hizara ny kolontsainy tamin'ireo vahoaka Afrikana i Lafrantsa”. Fanambaran'i Fillon natao tao anatin'ny vanimpotoana fanolorana ny tetikasany famerenana mamolavola ny fandaharam-pianarana sy ny hasarobidin'ny fampianarana indray ny fireharehana ho an'i Frantsa any am-pianarana. Tsy nandalo fotsiny tao amin'ireo tambajotra sosialy izany fehezanteny izany. Nampiasaina be tamin'ny Twitter sy Facebook ny tenifototra #FizaranaKolotsainaAoFrantsa mba hanangonana ho amin'ny toerana iray ny tenin'ilay kandidà amin'ny fifidianana ary mba hampatsiahivana azy ny dikan'ny vanim-potoana fanjanahantany ho an'ireo firenena voakasik'izany:
Andrana nokleary tao Reggane : alzeriana gadra miisa 150 nampiasaina ho toy ny olombelona fanaovana andrana https://t.co/A1RyI3KkBi #FizaranaKolontsainaAoFrantsa
Izany no antsoina hoe fizaràna, fitsangatsanganana kely iarahan'ny mpinamana #FizaranaKolontsainaAoFrantsa pic.twitter.com/i6n8rEpOJ
#FizaranaKolontsainaAoFrantsa ”iraka fampivoarana vahoaka” olona miisa 1911 no nanome naoty ny nono misarona mba tsy hanafintohina ireo tsy mivoatra pic.twitter.com/9FPdwkpvgW
Tsy misy na inona na inona fantatrareo mikasika ny kolontsaina ry tarika bibidia. Eny e, mbola hotazoninay ho ao amin'ny tranom-bakokay ny asanareo. #FizaranaKolontsainaAoFrantsa
Mampatsiahy ny lalàna 2005 izay nametraka ny fotokevitry ny ”anjara toerana miabo” notànan'ny fanjanahantany ny hevitr'i Atoa.Fillon. Manazava ny mahatonga ny sangany frantsay ho afaka manafina mora foana ny ampahany iray manontolo amin'ny tantarany ilay martinikey mpahay tantara, Gilbert Pago:
Ao anatina fotoana sarotra isian'ny fitomboan'ireo tia tanindrazana tafahoatra isika izao, fipoiran'ny hetsika fandàvana ny hafa, fanambaràna ireo sekta ara-drazana, fiforetana anaty, izany rehetra izany arahan'ny krizy erantany. Fa tokony hanontany ny fahateren-tsain'ireo mpitondra isika izay mitady hilomano hitety ny fihenan'ny fiarahana miaina. Mba handrosoan'i Frantsa, mba handrosoan'i Eoropa, mba handrosoan'ny olombelona rehetra ary mba handrosoanay Antillais, tsy maintsy lavina ny ”fandàvana” ny tantaran'izao tontolo izao. izany hoe ny tantarantsika rehetra. Betsaka no ilaina avy any amin'ny taranaky ny mpandresy sy ny taranaky ny resy. [Manampy izy] Tsy fizarana kolontsaina izany, fa fahatairana mafy, raha ny amin'ny ratram-po noho ny resaka fikatsahana harena, tsena sy ny hery mpamokatra ary ny fandringanana olombelona, sivilizasiona sy fanànana hita maso.
Efa nilaza tamin'ny 2007 i Alain Manbackou fa na ahoana na ahoana:
Taorian'ny dimampolo taona nisian'ny fanjanahantany ofisialy, nahafantatra ireo tanora tamin'ny vanim-potoana taty aoriana fa raha avy amin'i Frantsa, toy ny amin'ireo firenena hafa matanjaka, dia tsy azo atao ny manantena zavatra betsaka. Izy tenany no hiavo-tena, na ho levona ireo Afrikana. Fa ankehitriny, ary mikasika an'i Afrika, tsy ampy amin'i Frantsa fotsiny ny fitondrantena izay hahafahany hiresaka amim-pahatokiana sy amim-pahefana.
Ho an'i Dorcas Dienda, ilay tanora kandidà amin'ny fifidianana, ny fanontaniana mikasika ny vanim-potoana fanjanahantany dia tonga tamin'ny fomba hafa. Napetraky ny mpanolotra taminy nandritra ny fandaharana amin'ny televiziona Miss RDC 2016 tamin'ny 30 Aogositra, ny fanontaniana ”ny marika vita ao Kôngô” oharina amin'ny marika tandrefana. Nanazava ary i Dienda fa ”Kinga lavitra noho ny olo-mainty ny olona fotsy hoditra”. Ity misy ampahan'ilay fandaharana:
Tsy nandrasana ela ireo fanehoankevitra ary niteraka tabataba teo amin'ny sehatra aterineto kôngôley. Maro ireo mpiserasera no manebatebaka an'i Dienda ary mangataka fanazavana, izay nihazakazahan'i Dienda natao tamin'ny alàlana lahatsary Youtube:
Fa efa tara loatra. Ireto misy fanehoankevitra vitsivitsy, indrindra ny an'ilay kôngôley mpihira rap, Alesh:
Manafintohina tsotra izao ny milaza ireny fehezanteny ireny :” Ny olona fotsy mbola kinga lavitra noho ny olo-mainty ”. #DorcasDiendaOut
Aretin'ny fanambaniana tena, rehefa mahazo anay izay mantsy ianao #DorcasDiendaOut
Tsy vao voalohany izao ny tantaran'i Afrika no manala baraka ireo olo-malaza. Ilay kabary malaza nataon'i Nicolas Sarkozy tao Dakar tamin'ny 2007 izay milaza fa ny olona afrikàna dia ”tsy tafiditra tao anatin'ny tantara” dia mbola ao anatin'ny fahatsiarovan'ny maro.
Mety ao anatina fahafantarana tsara kokoa an'ity tantara ity no misy ny vahaolana, fanoheran'ny vahoaka ny famoretana amin'ny endriny rehetra ary hatrany atsimo ka hatrany avaratra.